Ny fampielezan-kevitra "Wi-Fi fizahan-tany" dia mitohy amin'ny tanoran'i Seychelles
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny fampielezan-kevitra "Wi-Fi fizahan-tany" dia mitohy amin'ny tanoran'i Seychelles
Ao anatin'ny fampielezana ny "fizahan-tany Wi", hetsika atao miaraka amin'ireo tanora ao amin'ny nosy nosy Seychelles nitranga tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay.
Ireo mpanabe avy amin'ny sekoly 20 eo ho eo manodidina an'i Mahé, Praslin ary La Digue dia nanatrika atrikasa naharitra antsasak'adiny izay nataon'ny Seychelles Hospitality and Tourisme Association (SHTA) momba ny fomba hanomezana fahafaham-po ny mpianatra amin'ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny fizahantany.
Ilay atrikasa, izay tafiditra ao anatin'ny hetsika amin'ny fanentanana momba ny "Tourism Wi", dia notontosaina tao amin'ny Auditite SITE ny zoma 13 novambra 2020.
Ny fiofanana dia nahitana ny famelabelarana sy ny fanolorana andiana loharanom-pahalalana ho an'ny mpandray anjara hampiasaina rehefa miatrika ny lohahevitra ao amin'ny kilasy na klioban'ny fizahantany.
Ny fitaovana natolotra, natao manokana hiresahana ny maha-zava-dehibe ny fizahantany, dia ampahany lehibe amin'ny fampielezan-kevitra, izay namporisihana ireo mpampianatra mba hamboarina ao an-dakilasiny mba hanatsarana ny mety sy ny fahombiazany, ary koa hizara amin'ireo mpiara-miasa aminy mba hiantohana ny fampiasana betsaka azy io.
Ity singa fanaovana fampielezan-kevitra ity dia natao manokana hanaterana ny ankizy manomboka amin'ny P5 ka hatramin'ny S2.
Ho fanampin'ity atrikasa ity, ny SHTA dia nikarakara dinidinika ho an'ny mpianatra izay natao ny Alakamisy 26 Novambra 2020, tao amin'ny foibe STB ao amin'ny Botanical House, Mont Fleuri.
Ny hetsika dia nahitana ny fandraisan'anjaran'ny zaza 8 avy any Pointe Larue, Anse Royale, Au Cap ary Mont Fleuri ambaratonga voalohany izay nizara ny heviny momba ny Indostrian'ny fizahantany sy ny maha-zava-dehibe izany ho an'ny firenena.
Ny K-Radio Seychelles dia navoakan'i Ramatoa Patsy Canaya, izay nanatri-maso ny fampisehoana fahatokisan'ny mpianatra ary koa ny hevitr'izy ireo momba ny zava-misy atrehin'ny firenena ankehitriny.
Ity hetsika ity dia tsy vitan'ny hoe nanome fampianarana sy nampahafantatra ireo tanora momba ny fizahan-tany fizahantany ihany koa ny tanora momba io raharaha io, fa nanolotra ihany koa ny fotoana hanazavana ny tsy fifankahazoan-kevitra iraisana.
Notarihin'i Seychelles Hospitality and Tourism Association (SHTA) miaraka amin'ny Departemantan'ny fizahantany, ny Seychelles Tourism Board (STB) ary ny Seychelles Tourism Academy (STA), ny fampielezan-kevitra momba ny "Tourism Wi" dia fampielezan-kevitra natao hanomezana toky ny olona eo an-toerana iza no mety manana ahiahy amin'ny fiverenan'ireo mpizahatany any Seychelles na eo aza ny lanjany eo amin'ny toekarentsika.
Ny fanentanana dia manasongadina ny fiantraikan'ny toekarena Seychelles tamin'ny areti-mandringana, izay nanitsakitsaka ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany, ary i Seychellois dia tsy maintsy miara-mivory mba hitahiry ny fitiavana mandray vahiny izay ankafizin'izy ireo.
Ny fanentanana dia natomboka tao amin'ny foiben'ny STB ao amin'ny Botanical House ny Alatsinainy 19 Oktobra 2020, ary nandalo dingana roa tamin'ny alàlan'ny sehatra isan-karazany, anisan'izany ny fahitalavitra, radio ary media sosialy.